Ngomhla we-16 kuCanzibe iiVenkile ezindala zeApple ziya kufumana ukuphakama | Ndisuka mac
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ezinye zezona ndawo zintle zeApple Stores ziye zafumana ukuphakanyiswa okupheleleyo, ukuphakanyiswa kobuso esinokuthi, uyiqhelanise noyilo olutsha olufunyanwa ziivenkile zakutshanje yinkampani. Okwangoku iApple ineeVenkile ezingama-500 kwihlabathi liphela kwaye ukutshintsha uyilo kunye akunakwenzeka, kodwa ubuncinci kuya kuzama kancinci kancinci. Ngokutsho kwemithombo enxulumene neApple, nge-16 kaMeyi ebusuku, ezinye zeeVenkile ezindala zeApple ziya kuyilungisa inxenye yomhombiso abasinike wona, Ukuthobela imigangatho emitsha yoyilo ephunyezwe ngu-Angela Ahrendts noJony Ive.
IBrussels yayiyiVenkile yokuqala yeApple eyayiza kuvulelwa uluntu nge lkwimimiselo emitsha yokuhombisa phantsi kolawulo lweeAhrendts kunye neIve, umhombiso osinike izitendi ezintsha zokubonelela ngeemveliso, imithi emincinci ezimbizeni, iscreen esikhulu kunye notshintsho olutsha kulwabiwo lweetafile apho zonke iimveliso zikhona ukongeza ekusetyenzisweni kwegranite kunye nemithi emihle.
Olu tshintsho luyakwenziwa ngobusuku buka-Meyi 16, ukuze ukulungiswa kwakhona kuhlupheke ziivenkile zakwa-Apple akuchaphazeli ukusebenza kwesiqhelo kwivenkile. Okwangoku, i-9to5Mac, epapashe iindaba, ayinalo ulwazi malunga neeVenkile zeApple eziza kuchaphazeleka kolu hlaziyo okanye oluya kuba loluphi uhlengahlengiso abalufumanayo.
Kwinyanga ephelile U-Angela Ahrendts uthe ufuna ukujika ii-Apple Stores zingaphezulu nje kwexabiso lentengiso yeemveliso zakhe, ifuna ukuba zibeyindawo yokudibana apho kubanjwa khona imiboniso, iikonsathi, izifundo zabantwana ... imisebenzi emitsha ecwangcisiweyo ngaphandle kokuqhubela phambili kulungiso lweVenkile yeApple kwiFifth Avenue eNew York eqhubeka nakwivenkile elandelayo yeApple. ibekwe kwiThala leencwadi laseCarnegie eWashintong DC.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngomhla we-16 kuMeyi ezona ndawo zakudala zeApple Stores ziya kufumana ukuphakanyiswa kobuso